वार्ताका लागि तयार छौँ तर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ – उपेन्द्र यादव | Madhesi - United We Stand
वार्ताका लागि तयार छौँ तर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ – उपेन्द्र यादव
January 29, 2007 at 4:57 am 1 comment
वार्ताका लागि तयार छौँ तर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मधेश जनअधिकार फोरम
– तर्राईमा तीनवटा सङ्गठनहरूले सङ्र्घर्ष चलाइरहेका छन्, वास्तवमा यो सङ्र्घर्ष केको लागि र किन भइरहेको छ –
दुइसय ३८ वर्षेखि राज्यले आन्तरिक उपनिवेशिकरणको नीतिअनुरूप मधेशीहरूको शोषण, दमन, उत्पीडन र मधेशमाथि जुन लुटको शासन कायम गरेको छ, त्यसको विरुद्ध मधेशी जनताको समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, समान अधिकार र राष्ट्रिय पहिचानका लागि गरिएको सङ्र्घर्ष हो ।
– तर्राई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा र तपाइँहरूको कुरो एउटै हो त ?
विषयवस्तु र समस्याका मूल वस्तुहरू मिल्दा छन् तर आन्दोलनका विधि र साधनहरूमा हाम्रो असहमति छ । हाम्रो शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलन हो ।
– तपाइँहरूको फोरम राजनीतिक दल हो कि सामाजिक संस्था ?
यो मधेशी जनताको राजनीतिक सङ्गठन हो । यो अझै पार्टि वनिसकेको छैन । यसमा अन्य पार्टि सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ र यसको आफ्नै संरचना छ ।
– तपाइँको यो राजनीतिक सङ्गठनको सुरुवात माओवादीले गरेको भनिन्छ नि –
एक समयमा यसमा माओवादी पनि थिए, एमाले, काङ्ग्रेस, सद्भावना पनि थिए । म पनि त्यो बेला एमालेमै थिएँ । सबै पार्टिर्को साझा मधेशी सङ्गठन बनाउने सोचका रुपमा यो फोरम स्थापना भएको थियो । विकासक्रममा अहिले राजनीतिक सङ्गठनको रुपमा बदलिएको छ ।
– सबै राजनीतिक दलका मधेशसँग सम्बन्धित आ-आफ्न मोर्चा र सङ्गठनहरू पनि रहेका छन्, तिनीहरू कसैले पनि मधेशका समस्या सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेर तपाइँले गठन गर्नुभएको कि अलग राजनीतिक दल चलाउन मन लागेर ?
होइन, राजनीतिक दल चलाउन मन लागेको भए त उतिबेलै गठन गरिहाल्थ्यौँ नि । कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले मधेशका मूलभूत समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फध्यान दिएनन् । एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी कसैले पनि त्यतिबेला मधेशी समस्या बुझेकै थिएनन् । मधेशीहरूलाई राज्यसत्तामा समानरूपले साझेदारी गराउनुपर्छ र मधेशको स्वशासन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेकै थिएन त्यतिबेला । हामीले फोरम बनाएर विषयलाई नीतिगतरुपमा अगाडि बढायौँ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ, मधेश स्वायत्त प्रदेश हुनर्ुपर्छ, जहाँ मधेशीहरूको स्वशासन होस्, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हुनुपर्छ, राज्यका हरेक अङ्ग र तहमा मधेशको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा माग हुन् । देशको नीति निर्माण र शासन, प्रशासनमा मधेशीहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा सहभागी र प्रतिनिधित्व गराइनर्ुपर्छ । यी कुरालाई हिजोका दिनमा साम्प्रदायिक भनिन्थ्यो आज यिनै यथार्थलाई र्सवत्र स्वीकार गरिएको छ । हाम्रो आन्दोलनले यो कुरालाई सही प्रमाणित गरिदिएको छ कि मधेशीहरू अब आन्तरिक उपनिवेशवादी नीतिबाट मुक्ति चाहन्छन् ।
– तपाइँहरूले माओवादीले पहिलोचोटी मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठनसँगै उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा उठाउनुभएको भनिन्छ नि ?
यो झुठो बकवास हो । सबभन्दा पहिला मधेश र सङ्घीय प्रणालीको कुरा तर्राई काङ्ग्रेसले २००८ सालमा उठाएको हो । त्यसपछि तर्राई जनक्रान्तिकारी दलको नेतृत्वमा यो विषयले प्रधानता पाएको हो । १९ सालमा तर्राई लिबरेशन प|mन्टले पनि यही कुरा उठाएको थियो । त्यसपछि सद्भावना परिषद् र सद्भावना पार्टि उठाए । माओवादीले त धेरै वर्षछि सङ्घीय प्रणालीको कुरालाई स्वीकार गरेको हो । माओवादीको आधिकारिक दस्ताबेज हेर्नुभयो कहीँ पनि सङ्घीय प्रणाली उल्लेख छैन । माओवादीका यी कुरा सबै भ्रामक हुन् । माओवादी नेताहरू जातीय स्वशासनका कुरा गर्नुहुन्छ, हामी भन्छौँ- मधेशमाथि मधेशी जनताको अधिकार हुनुपर्छ । मधेशको सम्पूर्ण सत्ता मधेशले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा माओवादीले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । उहाँहरूले अझै जातीय स्वशासनको कुरा गर्नुहुन्छ- कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ अहिले ।
– तपाइँको भनाइ, गर्राई र दृष्टिकोणमा फरक छ, तपाइँ हिन्दू कट्टरपन्थीहरूको पक्षमा रहेर नेपालमा धर्म निरपेक्षताको लागि लडिरहेकालाई गाली गर्नुहुन्छ भन्ने माओवादी आरोप छ नि ? –
जुन विषयमा अध्ययन छैन, त्यो विषयमा नबोल्नु नै माओवादीलाई मेरो सुझाव हो । यो आरोप निराधार छ । हामी पहिलेदेखि नै धर्म निरपेक्षताको पक्षमा छौँ । जहाँसम्म मधेशको कुरा छ- माओवादीभित्रै पनि मधेशलाई विभेद गरिएको छ । हेरौँ माओवादीको केन्द्रीय नीति निर्माण तहमा कतिजना छन् – अब राष्ट्रिय समस्या समाधानको बाटोतिर जाने हो भने सङ्घीय प्रणालीअर्न्तर्गत मधेशीहरूलाई अलग्गै राज्य चाहिन्छ । राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार मधेशको हुन्छ भनेर प्रचण्डले भन्न सक्नुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई स्वागत गर्छ र त्यो साहस उहाँहरूले देखाउन सक्नुपर्छ ।
दोस्रो कुरा मधेशीहरूको नागरिकता, आन्तरिक उपनिवेशीकरण लगायतका प्रशस्तै समस्याहरू छन् । ती समस्यालाई यो बेलामा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हिजोको सातदल-माओवादीबीचको वार्ता सत्ता साझेदारीतर्फगयो । उहाँहरू निर्वाचित नै नभइकन आफै टीका लगाएर सांसद हुनुभयो । मुलुकको सङ्घीय संरचना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ र यसमा २३८ वर्षेखि विभेदमा पारिएका मधेशी, जनजाति, आदिवासीलाई राज्यमा समानुपातिकरुपले सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने मूलभूत कुरालाई वार्तामा त्यत्तिकै छाडियो । उहाँहरूले गणतन्त्रको कुरा गर्नुभो तर राजालाई हटाउने कुरालाई त्यत्तिकै छाड्नुभयो । यो सारा दिल्लीमा सहमति भएको हो । राजा राखनुपर्छ भनेर दिल्लीमा सहमति गरेर उहाँहरू -माओवादी) ले नेपालमा सम्झौता गर्नुभएको हो । हिजोका वार्ता र सहमतिमा जुन कुरा छोडिएका छन्, ती कुरालाई अहिले उठान गर्नुपर्छ; मधेशी, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएका समुदायका कुराहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी आएका हाँ । मूलभूतरुमा मधेशीहरूलाई सम्झौताले र अन्तरिम संविधानले समेटेनन् । दलहरू पनि यस विषयमा संवेदनशील भएनन् । अब राज्य बढी जिम्मेवार र संवेदनशील भएर हिम्मतका साथ आउनर्ुपर्छ । त्यसमा माओवादी साथीहरूले पनि सकारात्मकरुपले सोचिदिएर र हिजो छुटेका भए पनि अब छुट्नुहुन्न भन्ने भावना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो मेरो आग्रह हो ।
– सरकारले मधेश जनअधिकार फोरम, दुबै तर्राई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा, आदिवासी जनजाति महासङ्घलगायत अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्ट र तर्राईमा सङ्र्घष्रत अन्य समूहहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ, तपाइँहरू के भन्नुहुन्छ ?
हामी वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न तयार छौँ । सरकारले वार्ताको वातावरण बनाओस् तर हामीले औपचारिक चिठ्ठी पाइसकेका छैनौँ । अर्को कुरा के छ भने- राज्य प्रशासनको आडमा खुलेआम मधेशीको हत्या गरियो, लुटियो । यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयले लिदै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनर्ुपर्छ । हामी वार्ताका लागि तयार छौँ, हामी मुलुकमा शान्ति र अग्रगमन होस् भन्ने चाहन्छौँ ।
– गृहमन्त्रीले राजीनामा नगरेसम्म तपाइँहरू वार्तामा बस्नुहुन्न ?
नगरेसम्म होइन, किन राजीनामा नगर्ने – गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गराउनुपर्यो । उहाँको मातहत रहेको प्रशासनको प्रत्यक्ष निर्देशनमा हत्या हुन्छ भने उहाँसँग कसरी वार्ता हुन्छ –
– प्रधानमन्त्रीले त गृहमन्त्रीको जिम्मा मैले लिन्छु भन्नुभएको छ त...
प्रधानमन्त्रीले त जिम्मा लिनुभयो तर उहाँको गृहमन्त्रीलाई हटाउनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले मधेशप्रति भर्खर सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसको म स्वागत गर्छ तर जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्यो । गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गराउनुपर्छ भन्ने सम्पर्ण मधेशको माग रहेको छ । यो मागलाई प्रधानमन्त्रीले पनि गम्भीरतापूवक लिनुहुनेछ । गृहमन्त्री रहुञ्जेल वार्ता हुँदै हुँदैन भन्ने होइन, वार्ता सफल बनाउनका लागि र समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री बाधक हुन्छन् ।-स्वतन्त्र समाचार सेवा)
ANTA – Press Release	Balkanization Threatens Nepal, Discrimination driving separatism in Terai
1. Son of Tirhut | January 30, 2007 at 4:00 am
Your interwiew is best among i have ever heard from the rest of Madhesi politicians or civilians.